Goobjoog Media Group: Waxaan Cadaalad u Raadineynaa Weriye Jamaal Khashoggi, Sawirro – Goobjoog News
Goobjoog Media Group: Waxaan Cadaalad u Raadineynaa Weriye Jamaal Khashoggi, Sawirro
Dilkii loo geystay saxafiga Washington Post ee Jamaal Khashoggi oo hadda loo heysto inuuba amray dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan, ma aheyn oo keliya mid waxashnimmo ah balse waxaa ay cabsi gelisay dhammaan saxafiyiinta caalamka.
Iyada oo taasi laga ambaqaadayo, weriyeyaasha Goobjoog Media Group ayaa maanta waxaa ay dhigeen isu soo bax lagu dalbanayo inuu cadaalad helo Jamaal Khashoggi. Dilka Khashoggi wuxuu ahaa mid arxan-darro ah, oo aan horay dunida uga dhicin, waana dhambaal ka dhan saxaafadda, xuriyadda hadalka, runta, xaqa, xaqiiqda iyo inta u doodda xuquuqda inta dulman.
Goobjoog ahaan, isu soo baxa aan maanta sameynay, keliya ma aheyn in aanu u doodeyno jiritaanka warbaahin xor ah, madaxbannaan iyo dhiirigelinta inay saxafiyiinta gutaan shaqadooda cabsi la’aan balse waa mas’uuliyad akhlaaqi ah, oo naga saaran in aan cambaareyno dilkii foosha xummaa.
Dilka siyaasadeysan ee Jamaal Khashoggi waxaa ay daliil u tahay awoodda maamullada qaar oo ilaalinta maslaxadooda gaar ah u sameyn kara dambi midkan oo kale ah.
Maanta, Jamaal Khashoggi, laakin berri waxaa ay arrintan ku dhici kartaa warbaahin iyo Saxafi Soomaaliyeed ama meel kalaba joogo, waa in aan mar walbo xaqa difaacno, waayo aamusnaanteenna waa nagula xisaabtami-doonnaa.
Waatii uu horay u yiri Martin Luther King “Ma xusuusan-doonno oraahda cadawgeenna, balse aamusnaanta saaxiibadeen”.
DEG-DEG: Madaxwayne Xasan Sheekh oo gaaray Baraawe
Dibad-bax Axmed Daaci lagu tageerayo oo Muqdisho ka dhacay iyo AMISOM oo ka hadashay howlgalkii Wadajir
Beesha Caalamka oo Soo Dhexgashay Khilaafka Dowladda Federaalka iyo Jubbaland
Gudoomiye Jawaari Iyo Safiirka Shiinaha Ee Soomaaliya Oo Arimo Dhowr ah Ka Wada Hadlay
Xvutkx glkwex generic cialis how much is cialis
Phsvof zukpou genaric viagra cialis price walgreens
Mgtgtq afmtoa buy cialis online cialis on line
Fssyjt dixxax viagra online pharmacy online
Gurdgm lidhun canadian pharmacy online Ysgoo
Soomaaliya Oo Ka Baxday Shir Madaxeedka Carabta Iyo Afrika
national health insurance canadian pharmacy...
does grapefruit make viagra work better efeitos esperados do...
personal loans personal loans for bad credit...
sildenafil without doctor prescription cheap generic sildena...
personal loans payday loans online...